Faahfaahin: Weerarkii xarunta nabadsugidda ee Doolow – Radio Daljir
Luulyo 8, 2021 6:33 b 0
Taliyihii ciidanka nabadsugidda dawladda federaalka ee degmad Doolow, ahaana taliyaha amniga Xasan Cibaad ayaa ku dhaawacmay is rasaasayn dhexmartay labo ciidan oo dawladda ka wada tirsan subaxnimadii hore ee saaka oo Arbaco ahayd.
Is rasaasaynta dhalisay dhaawaca taliyaha ayaa timid kadib markii ciidanka kuwa Asluubta ah ay weerareen xarunta ciidanka nabadsugidda ee degmada Doolow, halkaasi oo taliyihu ku suganaa marka weerarku.
Taliye Xasan Cibaad iyo askari illaalada xarunta ahaa oo weerarkaasi ku dhaawacmay ayaa isla maanta loo qaaday magaalada Muqdisho, iyagoo la saaray diyaarad kuwa rakaabka ah.
Sababta ciidankaasi ay u weerareen xarunta ciidanka nabadsugidda, waxaa Daljir loo sheegay in ay la xiriirtay asakari ka tirsanaa ciidankaasi asluubta oo ku xiran saldhigga darteed.
Ciidamada weerarka loo tarinayo ee asluubta ayaa fadhi ku leh Doolow, inkastoo xarumihii asluubta lagu yaqaannay aysan ka hawlgelin, Doolow na aysan ku oolin goobaha Jeelku ka mid yahay ee asluubta ka shaqayso, balse waxay degganyihiin garoonka diyaaradaha ee Doolow.
Ma ahan arrin cusub in ay isku dhacaan ama is weeraraan ciidamo dawladda ka wada tirsan ama ciidan dawladda ahi ay weerar ku qaadaan xarun dawladeed, balse tani waxay imaanaysaa xilli liidasho amni oo gobolka ah laga warramayo, uuna hoos uga soo dhacay heerkii hore ee lagu yaqaannay.
Ciidamo badan oo kuwa dawladda federaalka ah, iskuguna jira saddexda qaybood ee ciidamadu ka koobanyihiin ayaa ka hawlgala gobolka Gedo, haddana ma jiraan hawlgallo muuqda oo loo qaaday xagga amniga guud iyo la dagaallanka Alshabaab muddadii dawladda federaalku maamulaysay gobolka Gedo.
Booliiska Soomaaliya oo soo bandhigay Rag dhac ka gaysan jiray Muqdisho